တရုတ် Clamp ပစ္စည်းများ, သံမဏိ Clamp Kit, အနားကွပ်နှင့်အတူ Clamp Kit, သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Clamping ပစ္စည်းများ
Clamping ပစ္စည်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Clamping ပစ္စည်းများ, သံမဏိ Clamp Kit ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အနားကွပ်နှင့်အတူညှပ် Kit R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ပလတ်စတစ် Box ကိုအတူ High Quality သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများ
CK-16 သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများ
58pcs အနားကွပ်အခွံမာသီးနှင့်အတူ Deluxe သံမဏိ Clamp Kit
58pcs Deluxe သံမဏိ Clamp Kit Tools များ
ပလတ်စတစ် Box ကိုအတူ High Quality သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများ အစုံပါရှိသည် holder.Each သတ္တုနှင့်အတူကိရိယာအစုံ Clamping 58pcs 6-ကို T-ပေါက်အခွံမာသီး 6-အနားကွပ်အခွံမာသီး 4-စုံတွဲအခွံမာသီး 6-အဆင့်ညှပ် 12-ခြေလှမ်းလုပ်ကွက် 24 လုံး 4ea ။3'',4'',5'',6'',7'', 8 '' အရှည်...
CK-16 သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများ အစုံပါရှိသည် holder.Each သတ္တုနှင့်အတူကိရိယာအစုံ Clamping 58pcs 6-ကို T-ပေါက်အခွံမာသီး 6-အနားကွပ်အခွံမာသီး 4-စုံတွဲအခွံမာသီး 6-အဆင့်ညှပ် 12-ခြေလှမ်းလုပ်ကွက် 24 လုံး 4ea ။3'',4'',5'',6'',7'', 8 '' အရှည် 1.Material: S45C Clamp...
58pcs အနားကွပ်အခွံမာသီးနှင့်အတူ Deluxe သံမဏိ Clamp Kit 1.Material: S45C Clamp ကိရိယာအစုံ ကိရိယာအစုံ clamping 2. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှု 3. 58pcs / 52pcs သံမဏိ Clamp ကိရိယာအစုံ ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်တူးဖော်အင်္ကျီလက် inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ်, ER Collets, ဒါပေါ်မှာ collets နှိပ်...
58pcs Deluxe သံမဏိ Clamp Kit Tools များ အစုံပါရှိသည် holder.Each သတ္တုနှင့်အတူကိရိယာအစုံ Clamping 58pcs 6-ကို T-ပေါက်အခွံမာသီး 6-အနားကွပ်အခွံမာသီး 4-စုံတွဲအခွံမာသီး 6-အဆင့်ညှပ် 12-ခြေလှမ်းလုပ်ကွက် 24 လုံး 4ea ။3'',4'',5'',6'',7'', 8 '' အရှည် 1.Material: S45C...
တရုတ်နိုင်ငံ Clamping ပစ္စည်းများ ပေးသွင်း
ခိုင်မာသော: HRC32 ± 5
အပူသံမဏိအနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ် finish ကိုကုသ။
ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှု Clamping: စက်စားပွဲပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်-piece အသီးအသီးအမျိုးကိုပြုပြင်တာတွေအဘို့အ Apply ။
ပလပ်စတစ်ထိန်သိမ်းသို့မဟုတ်သစ်သားပန်းကန်ထဲမှာ Set (အနက်ရောင်အရွယ်အစား 25mm) ၏ပါဝင်ပါသည်
ကို T-အခွံမာသီး 6pcs
1. ရိုးရှင်းသောနှင့်အဆင်ပြေဒီဇိုင်း, မြင့်မားသောတိ
2. အထူးအလွိုင်းသံမဏိ, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
sidelock နှင့်အတူ tool ကို၏ Clamp များအတွက် 3.
5. အမြင့်ခိုငျမာခိုင်မာခြင်းနှင့် resisance, အမြင့် thermo တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြင့်မားသောအပူခုခံဝတ်ဆင်
သံမဏိ Clamp Kit
M 16 သံမဏိ Clamp ပစ္စည်းများ